सानिमा बैंकको नाफा ५२ प्रतिशतले बढ्यो सानिमा बैंकको नाफा ५२ प्रतिशतले बढ्यो Canada Nepal
Jan 27 2022 | २०७८, माघ १३गते
२०७८, माघ १३गते
कांग्रेस कार्यालयमा मुख्य सचिव रिक्त
ओमिक्रोन भेरियन्ट लामो समयसम्म छाला र प्लाष्टिकमा जीवितै रहन्छ - अध्ययन
महासचिव पदका दाबेदारबीचको भेटवार्ता, प्रचण्डले कसलाई रोज्लान् ?
काठमाडौंमा घरभित्र आगो बालेर सुतेका एक दम्पत्तीको निस्सासिएर मृत्यु
प्रदर्शनमा उत्रिएका महिला पक्राउ परेको विवरण झुट भएको तालिवान सरकारका प्रवक्ताको दाबी
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
सानिमा बैंकको नाफा ५२ प्रतिशतले बढ्यो
क्यानाडा नेपाल कार्तिक १५ २०७८
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म सानिमा बैंकले ५६ करोड ७८ लाख ६० हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत वर्ष यसैअवधिमा बैंकले ३७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
समीक्षा अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी १८ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढेको छ भने सञ्चालन नाफा ३३ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकको खराब कर्जा पनि शून्य दशमलव २९ प्रतिशतले घटेर शून्य दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको छ ।
असोज मसान्तसम्ममा बैंकको वितरण योग्य नाफा एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष यसको वितरण योग्य नाफा १० करोड २३ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको थियो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी नौ अर्ब ६८ करोड १५ लाख १९ हजार रुपैयाँ छ ।
रिटेन्ड अर्निङसहित बैंकको जगेडा कोष रकम पाँच अर्ब ७५ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । असोज मसान्तसम्ममा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी छ रुपैयाँ १४ पैसाले बढेर २२ रुपैयाँ ७८ पैसा कायम भएको छ । यसको प्रतिसेयर नेटवर्थ १५९ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ ।
कार्तिक १५, २०७८ सोमवार १२:२५:०४ बजे : प्रकाशित
हेर्नुहोस् आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम ११९ रुपैयाँ र बिक्री दर ११९ रुपैयाँ ६० पैसा कायम गरेको छ ।
युरोपियन यूरो एकको खरिद दर १३४रुपैयाँ ७ ६ पैसा र बिक्री दर १३५रुपैयाँ ४४ पैसा छ । यूके पाउन्ड स्टलिङ एकको खरिद दर १६० रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्री दर १६१ रुपैयाँ ७१ पैसा छ । स्वीस फ्रेङ्क एकको खरिद दर १३० रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्री दर १३१ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर ८५ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्री दर ८५ रुपैयाँ ५० पैसा छ । क्यानेडियन डलर एकको खरिद दर ९४ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ भने बिक्री दर ९४ रुपैयाँ ९० पैसा छ ।
जापानी येन १० को खरिद दर नेपाली १० रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्री दर १० रुपैयाँ ५३ पैसा छ भने चिनियाँ यूआन एकको खरिद दर १८ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्री दर १८ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
साउदी अरबियन रियाल एकको खरिर दर ३१ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्री दर ३१ रुपैयाँ ८८ पैसा छ भने कतारी रियाल एकको खरिद दर ३२ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्री दर ३२ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचीमा उल्लेख छ ।
मलेसियन रिंगिट एकको खरिद दर २८ रुपैयाँ ४१ पैसा छ भने बिक्री दर २८ रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ भने कोरियन वन १०० को खरिद दर नाै रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्री दर १० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
माघ ११, २०७८ मंगलवार १०:४१:५७ बजे : प्रकाशित
ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, यस्तो छ बजार भाउ
काठमाडौं - सुनकाे मूल्य प्रतिताेला ५०० रुपैयाँले बढेकाे छ । साेमबारकाे तुलनामा म‌ंगलबार छापावाला सुनकाे मूल्य प्रतिताेलामा ५००ले बढेर ९४ हजार रुपैयाँमा काराेबार भइरहेकाे नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएकाे छ ।
महासंघका अनुसार सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला ९३ हजार ५०० रुपैँयामा कारोबार भएको थियो ।
यसैगरी, मंगलबार तेजावी सुनको मूल्य तोलाको ९३ हजार ५०० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । चाँदीको भाउ प्रतितोला एक हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
माघ ११, २०७८ मंगलवार ११:१९:५७ बजे : प्रकाशित
भन्सारलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक - अर्थमन्त्री शर्मा
काठमाडाैं - आज विश्व भन्सार दिवस । नेपालमा पनि ७०औँ भन्सार दिवस मनाइँदैछ । दिवसका अवसरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण, विद्युतीय माध्यमको पूर्ण उपयोग र समग्र पूर्वाधालाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देशमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘सेवाग्राहीलाई झन्झटरहीत सरल र पारदर्शी सेवा आवश्यकता हो । भन्सार जाँचपासलाई सरल बनाउन आधुनिक उपकरणसमेतको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’
भन्सार प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीले केवल आफ्नो पेशाका लागि मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी भएकोसमेत बोध हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले विगत दुई वर्षदेखिको कोभिड-१९ संक्रमणलाईसमेत न्यून गर्न भन्सार प्रशासनले निसंक्रमण तथा शीघ्र जाँचपासका उपाय अपनाएर आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्न र वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्दै आएको बताएका छन् ।
भन्सार दिवसको अवसरमा सुरुवात भएको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको दिगोपन कायम गरी भन्सार प्रशासनको आधुनिकीकरण, विकास र प्रविधियुक्त कार्य प्रणालीको व्यापार लागत घटाउन र व्यापार सहजीकरण तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सफलता मिलोस् भन्दै उनले शुभकामना दिएका छन् ।
माघ १२, २०७८ बुधवार ०८:२५:३७ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - बुधबार नेपाली बजारमा सुनकाे भाउ बढेकाे छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनकाे मूल्य ताेलामा चार सय रुपैयाँले वृद्धि भएकाे छ ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ९४ हजार चार सय रुपैयाँ कायम भएको छ । मंगलबार पनि सुनकाे मूल्य पाँच सय रुपैयाँले बढकाे थियाे । महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला ९४ हजारमा कारोबार भएको थियो।
यसैगरी, तेजावी सुनको मूल्य तोलाको ९३ हजार नाै सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार तीन सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
माघ १२, २०७८ बुधवार ११:२८:०१ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । बिहिबार अमेरिकी डलरसहित अन्य केही देशको विनिमयदर घटबढ भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १९ रुपैयाँ ३५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १९ रुपैयाँ ९५ पैसा तोकिएको छ ।
एक बहराइन दिनारको खरिददर ३ सय १६ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १८ रुपैयाँ २१ पैसा तोकिएको छ। एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ७८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ ।
एक युरोको खरिददर १ सय ३४ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १ सय ३५ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ । एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ८२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ९८ पैसा तोकिएको छ ।
एक मलेसिया रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ४७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ । एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ९४ रुपैयाँ ६८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९६ रुपैया ६६ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ९७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ २ पैसा तोकिएको छ । एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६१ रुपैयाँ २२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६२ रुपैयाँ ३ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै जापानी यनको खरिददर १० रुपैयाँ ४५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १० रुपैया ५१ पैसा तोकिएको छ । यस्तै एक अस्ट्रेलियन डलरको खरिददर ८५ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ८६ रुपैयाँ ५ पैसा रहेको छ ।
माघ १३, २०७८ बिहिवार ०९:५२:०१ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ह्वात्तै घटेको छ । बुधबार तोलामा ४ सय रुपैयाले बढेको सुनको मूल्य आज तोलामा ९ सय रुपैयाले घटेको हो ।
बुधबार प्रतितोला ९४ हजार ४ सयमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर प्रतितोला ९३ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै आज चाँदीको मूल्य घटेर १२ सय ९० रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ ।
माघ १३, २०७८ बिहिवार ११:३३:०९ बजे : प्रकाशित